ဘလော့ | ရွှေ Web ကိုဆုပေးပွဲ
အားဖြင့် hunter | သြဂုတ် 20, 2018 | ဘလော့
အားဖြင့် hunter | သြဂုတ် 6, 2018 | ဘလော့
အားဖြင့် hunter | Jul 30, 2018 | ဘလော့
အားဖြင့် hunter | ဇွန် 19, 2018 | ဘလော့
Harbortouch ထံမှအခမဲ့ POS စနစ် Get လုပ်နည်း
အားဖြင့် Darin Carter က | ဇွန် 13, 2018 | ဘလော့
The POS (ရောင်းရန်၏ point) System ကိုလက်လီနှင့်စားသောက်ဆိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအရှိဆုံးအရေးပါစုတစုတစျခုဖွစျသညျ, ဒီရက်ပိုင်းတွေမှာ. ငွေမှတ်ပုံတင်ကျော်သင့်ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက် POS system ကိုထားရှိခြင်းသည်သင်တို့အပေါင်း၌အသေးစိတ်အရောင်းအစီရင်ခံစာများအရကူညီပေးသည်. ထို့ကြောင့်, it is great for the cashier as well...